China High Precision Xinling Single-Track Online AOI XLIN-VL-AOI66 ee PCBA soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Xinling
Saxnaanta sare ee Xinling Single-Track Online AOI XLIN-VL-AOI66 ee kormeerka PCBA
Xinling hal-track online AO ​​​​XLIN-VL-AOI66, oo ku habboon kormeero badan iyo boosas xakameyn ah ee SMT / DIP, oo ku qalabaysan helitaanka sawirka, kontoroolka dhaqdhaqaaqa, iyo algorithms falanqaynta software ayaa loogu talagalay geeddi-socodka elektaroonigga ah, oo leh tayada sawirka xasilloon. Natiijooyinka ogaanshaha lagu kalsoonaan karo, saxda ah oo hufan, ogaanshaha saxda ah ee alaabooyin badan oo cilladaysan oo daboolaya cilladaha wadajirka ah ee alxanka, daabacaadda koollada alxanka, cilladaha qaybta, khaladaadka shirarka iyo cilladaha kale ee guddiga wareegga, kaa caawinaya inaad furto suuqa, wanaajiso hufnaanta, iyo dhimista kharashka.
● Fudud oo dareen leh mashiinka-mashiinka, oo la jaan qaadaya caadooyinka hawlgelinta fudud oo waxtarka leh ee maalinlaha ah.
● Kaameeraha dhijitaalka ah ee midabka leh ee saxda ah, tayada sare leh, shaqada xasiloonida sare si loo sawiro sawirada, dib u soo celinta sawirada dhabta ah iyo kuwa dabiiciga ah, oo lagu gaaro wax soo saarka tayada sare leh.Aragti ahaan, waxaan dooran karnaa kamarado aan xadidneyn.
● Muraayadaha telecentric (standard) xallinta sare, qoto dheer oo qoto dheer oo duurka ah, qalloocan aadka u hooseeya iyo naqshadaynta iftiinka isbarbardhigga ah, iwm, waxay si cad u sawiri kartaa leexinta guddiga wareegga iyo qaybaha dhaadheer iyada oo aan jeexjeexin.
● Software dhamaystiran oo dabacsan, shuruudaha tababarka ugu yar, fududahay in la isticmaalo.
● Saaxir socodka shaqada si uu habayntu joogto ugu ahaado.
● Naqshadeynta albaabka silitaanka ee habboon ayaa ka dhigaysa dayactirka mid ku habboon.
● Naqshadaynta cabbirka weyn ee ogaanshaha, kaas oo buuxin kara shuruudaha ogaanshaha ee PCB-yada kala duwan.
● Waxaa loo isticmaali karaa OK/NG-da labanlaabka ah ee helitaanka isku xirka guddiga si aad si dhab ah u ogaatid xiriirka aan fiicnayn ee imtixaanka online-ka ah, helitaanka guddiga iyo dayactirka, iyo taageeridda xiriirka tooska ah ee hore iyo dambe ee qalabka wax soo saarka (nooca online).
● Nakhshadeynta barnaamijka khadka-ka-baxsan iyo ku-dhaqanka shaqada wax-ka-hortagga khadka-ka-baxsan si loo kordhiyo isticmaalka qalabka.
● Codsi dhammaystiran oo kala duwan oo algorithms ah oo wax ku ool ah, codsiga software waa dabacsanaan badan.
● Isticmaalka terminaalka mobaylada ee hoos yimaada shabkada bilaa-waayirka ah waxay samayn kartaa goobo shaqo goob kasta oo aqoon-is-weydaarsiga ah, iyadoo la qaadanayo hal-ilaa-badan, iyo xaqiijinta xogta mashiinnada badan ee internetka iyada oo loo marayo goob dayactir ah si loo gaaro ujeedada badbaadinta shaqaalaha.Waxay si sax ah u soo jeedin kartaa magaca cilladda saxda ah, waxaana taageeraya nidaamka xogta SQL oo dhammaystiran.Waxay bixisaa nidaamka falanqaynta tirakoobka SPC qaab jaantusyada pie iyo histograms, taas oo ku haboon macaamiisha si ay u sameeyaan falanqaynta habka iyo horumarinta tayada.
● Algorithms-yada jawaabta gaarka ah sida aqoonsiga jilaha OCR iyo tijaabinta dariiqa waxay si wax ku ool ah ula kulmi karaan kormeerka tayada daabacaadda ka dib, iyo heerka ogaanshaha iyo heerka gudbinta ayaa sarreeya.
● Nidaamka xakamaynta caqli-galnimada sare, kormeerka waqtiga-dhabta ah ee heerka tayada badeecada iyo jawaabta waqtiga.
● Xaqiiji isku xirka tooska ah ee halbeegyada qaybaha iyada oo loo marayo CAD, ama mashiinka meelaynta si aad u soo dejiso xogta isku dubaridka si loo xaqiijiyo otomaatiga naqshadaynta barnaamijka.
AOI PRAMETERS SHAQEEYA
Guddiga wareegga ayaa la kormeeray ka dib daabacaadda koollada SMT, ka hor / ka dib alxanka dib-u-socodka SMT, ka hor / ka dib alxanka hirarka DIP, looxa jilicsan, aluminium substrate.
Habka ogaanshaha waxa ku jira 26 algorithms sida barasho qoto dheer, falanqaynta vector, xisaabinta midabka, soo saarista midabka, xisaabinta miisaanka, isbarbardhigga sawirka, OCV/OCR, iwm. , Aqoonsiga koodhka QR, aqoonsiga jilaha, xaqiijinta jilaha, aqoonsiga qiimaha iska caabinta, ogaanshaha goobada, ogaanshaha polarity, ogaanshaha xoqan, ogaanshaha buundada, celceliska qiimaha, qiimaha ugu badan, qiimaha ugu yar, qiimaha kala duwan, qiimaha celceliska maxaliga ah, saarista dhalaalka, qaraabo dhimis, 2 Ogaanshaha xagasha dhamaadka, ogaanshaha isku xidhka, jiilka qayb hoosaadka, qiimaha la xisaabiyay, ogaanshaha guddida oo dhan [+], ogaanshaha guddida oo dhan [-], meelaynta hal dhinac)
Kamarada Xawaaraha sare ee kamarad dhijitaalka ah oo caqli badan
Xallinta kamarada/ muraayada kamarada: 5 milyan-20 milyan pixels, midab buuxa oo kamarad dhijitaalka ah oo xawaaraheeda sare leh.Waxaan xakameyneynaa horumarinta koodhka isha waxaanan leenahay aragti ahaan xulasho aan xadidneyn oo kamarad ah.Xallinta muraayadaha: 7um/10um/15um/20um/25um, kaas oo loo habayn karo codsiyada gaarka ah.Muraayadaha telecentric ee caadiga ah.
Isha iftiinka Iyada oo ay ku xiran tahay qaabka codsiga ee isha midabka kanaalka badan ee saddex-geesoodka ah, dooro qeexida RGB ee ku habboon iyo isha iftiinka coaxial.
Qaabka barnaamijka wax u qorida, raadinta tooska ah, soo dejinta xogta CAD iyo maktabada qaybta u dhiganta oo toos ah.
Nooca daboolida daabicista Alxanka daabacaadda: joogitaanka ama maqnaanshaha, kabidda, daasadaha yar, daasadaha badan, wareegga furan, daasadda joogtada ah, wasakhowga, xagashada, iwm.
Cilladaha qaybta: qaybo maqan, qaybo badan, kabid, qalfoofka, dhagaxyada xabaasha, istaagida dhinac, qaybo rogan, qaybo khaldan, waxyeelo, rogtay, XYθ, iwm.
Cilladaha wadajirka ah ee alxanka: daasad aad u badan, daasad yar, alxan been ah, daasad joogto ah, kubbadaha daasadaha, koollada oo buuxdhaafay, aan lahayn sunta rasaasta, wasakhowga bireed naxaasta ah, iwm.
Hawlaha gaarka ah Si toos ah u wac barnaamijka, wanaaji ogaanshaha guud ahaan looxa, jigsaw iyo calaamado badan, calaamad xun, tijaabo isku mar ah oo dhinacyo badan leh.
Qaybta ugu yar tijaabada 01005 chip, 0.3 pitch IC.Hagaajin qaabaynta indhaha iyadoo la raacayo habraaca habraaca macaamilka.
SPC iyo kantaroolka habraaca diiwaan gelinta xogta imtixaanka dhammaan habka oo dhan waxayna sameeyaan tirakoobyo iyo falanqayn, fiiri heerka wax soo saarka iyo falanqaynta tayada, iyo qaababka warbixinta wax soo saarka sida Excel, Txt, iyo Word.
Nidaamka Barcode Aqoonsiga otomaatiga ah ee barcode (1D ama 2D code), awood u leh inuu aqoonsado koodhka aadka u weyn (FoV smart splicing)
Nidaamka hawlgalka Windows 10 x64 nidaamka hawlgalka, Shiinaha ama nooca luqadaha badan, nidaamka hawlgalka ugu dambeeyay.
Natiijooyinka tijaabada soo saarista 32-inch LCD bandhigay, OK/NG signal.
Cabbirka PCB Min: 50*50mm;ugu badnaan: 460 * 400mm;waxaa loo habeyn karaa codsiyada gaarka ah.
Dhumucda PCB waxay u dhaxaysaa 0.3 ilaa 5 mm
Farqiga cidhifka nidaamka PCB-ga, bannaan oo u dhexeeya 3.5mm cidhifka looxa.
Miisaanka ugu badan ee PCB 3KG
Darajada foorarsiga PCB <5mm ama 3% dhererka geesaha ee PCB
PCB sare iyo kan hoose oo dhererkiisu cad yahay PCB sare (Dhinaca sare): 30mm PCB hoose (dhinaca hoose): 80mm
Nidaamka wareejinta Hoos-u-cusbooneysii, magdhow toos ah ee PCB qaloocsanaan, si toos ah gudaha iyo dibadda looxa, suunka fidsan, hagaajinta ballaca tooska ah.
Wareegtada dhulka 880 ilaa 920 mm
Jihada/waqtiga wareejinta socodka waxa loo dejin karaa bidix → midig →bidix iyada oo loo marayo software-ka.Waqtiga gelitaanka/ bixitaanka: 3-5 ilbiriqsi.
X/Y madal wadista Screw iyo AC servo motor drive, PCB go'an, Kamaradu waxay u dhaqaaqdaa jihada X/Y, unug kastaa wuu gudbay shahaado.
Korontada AC220V 50/60Hz 1.5 KW
Cadaadiska hawada 0.4 ~ 0.8Mpa
Isgaarsiinta hore iyo gadaal ee qalabka Smema
Miisaanka qalabka qiyaastii 650KG
Cabirka qalabka: L1000 (dhererka jidhka la haysto) * W1000 (marka laga reebo qalabka gacanta) * H1660 mm, dhererka kuma jiraan nalalka signalada.
Heerkulka deegaanka iyo qoyaanka 5 ~ 35 ℃ 35 ~ 80% RH (aan uumi lahayn)
Xeerarka badbaadada qalabka U hoggaansamaan heerarka badbaadada CE
Nidaamka saldhigga dayactirka ee ikhtiyaariga ah, nidaamka barnaamijyada offline, nidaamka server-ka SPC, nidaamka aqoonsiga barcode, interface MES / Dukaan Interface.
Hore: Dual-Track Online Mashiinka XLIN-VL-AOI68 AOI ee Kormeerka Badan iyo Goobaha Xakamaynta ee SMT/DIP
Xiga: 8MM, 12MM, 16MM, 24MM, 32MM, 44MM iyo 56MM SIPLACE Qudiyaha smart X Splice Sensor
8MM, 12MM, 16MM, 24MM, 32MM, 44MM iyo 56MM SIPL...
Khadka isku dhafka ee SMT Saki 3D Automated Optical Ins...
ASM nidaamka meelaynta mashiinka meelaynta Vacuum g ...
ASM SMT mashiinka meelaynta CO dareeraha / BE dareeraha / Z ...
Asalka cusub ee mashiinka meelaynta ASM vacuum Nozzl...
ASM smt nidaamka isu imaatinka SIPLACE TX module CPP ...